Anigu waxaan ahay Roma - Settled
Waxaan ahay guri laawe ama qof aan cinwaan go’an lahayn
Haddii aad tahay Roma ama Romani, waad codsan kartaa Xaaladda Deggan haddii aad haysatid dhalashada mid ka mid ah waddamada EU.
Haddaad haysatid telefoonka casriga ee Android iyo baasaboor ama kaar aqoonsi, waxaad fiirin kartaa inaad soo dejisan kartid App, aadna bilaabi kartid nidaamka codsigaaga. Hadaadan haysan telefoonka casriga ama telefoon haysta teknoolajiyada habboon, waxaad dukumiintiyadaada ku sawiri kartaa xarunta iskaanka. Waa inaad ballan samaysatid, waxaana dhici karta inaad lacag bixisid. Xafiiska Arrimaha Gudaha wuxuu sameeyay hagid ku saabsan waxay u aqbali karaan caddayn degganaansho. Waxaa ka mid ah taas bayaan ka socda hay’ad samafal rasmi ah ama hay’ad kale oo aad xiriir la lahayd muddo waqti ah.
Haddii mid ka mid ah ehelkaaga sokeeye uusan u dhalan waddamada kor xusan, weli way codsan karaan qorshahan haddii ay adiga kula nool yihiin haddeer, ayna rabaan inay sii joogaan halkan. Waad sii wadi kartaa kuwooda markaad kaaga dhamaysid.
Wixii su’aalo guud ee macluumaad siyaada la xiriira, fadlan kala xiriir Kooxda Taageeridda Roma (Roma Support Group ) marka ugu horreysa. Waxay kaloo bixiyaan talooyin gaar ah oo ku saabsan Brexit. Sidoo kale Socdaalka ka Hor (Travelling Ahead) waxay kaa siin karaan talooyin siyaada gudaha Wales. [settled_add_boilerplate_content name=”Legal aspects”